Gịnị mere ụmụaka ji anwụ anwụ? Akụkọ banyere ndị mmụọ ozi siri ike | Ilblogdellafede
Kedu ihe kpatara ụmụaka ji anwụ? Akụkọ banyere ndị mmụọ ozi siri ike
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 7, 2020 Ọgọstụ 7, 2020
Gịnị mere ụmụaka ji anwụ anwụ? Nke a bụ ajụjụ nke ọtụtụ ụmụ nwoke nwere okwukwe na-ajụkwa onwe ha ma ọtụtụ mgbe okwukwe n’onwe ya bụ nke mbụ na-ada mgbe nwatakịrị nwụrụ. Odi ihe kpatara Chineke ji akpo nwata dika onwe ya. Aga m agwa gị akụkọ banyere ndị mmụọ ozi dị ike.
Chineke kpọrọ Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael ka ọ bịaruo onwe ya n’ihu ocheeze ya dị ebube wee gwa ya “taa kedu ka ị si eme oge ọbụla na m na-enye gị iwu ka ị gaa n’ụwa ma ị ga - ahọrọ ụmụ mara mma, ndị nwere ọgụgụ isi na ndị siri ike m kere. Anyi aghaghi iwete ha ebe a ka anyi choro ndi mmuo ozi di ike n’ime usuu ndi agha nke anyi nke eluigwe iji merie ihe ojoo, nyere ndi no na nkpa aka, me ka Paradais jiri pealu di oke onu ahia ”. Ya mere, Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael na-eme ihe Chineke gwara ya na ọ ga-aga andwa ma họrọ ụfọdụ ụmụaka ka ha kpọọ ndị agha ya.
Na ụwa, agbanyeghị, icheta ụmụaka ndị a n’eluigwe, ọdachi na-aga n’ihu n’ezie na ha ga-agabiga ọnwụ, na-eme ka ezinụlọ ha nwee nnukwu ihe mgbu.
Ma ụmụaka ndị a akpọkuru n’eluigwe nata mma agha nke gliaccio, ngwa agha ọla edo, amara na ike sitere na Chineke, ịhụnanya na ịdị mma nke Eluigwe. Na nkenke, ha gh’esi ike ndi mo-ozi n’ozi nke Chineke ndi neme ka ndi mo-ozi nupu isi gha jijiji, n’elu uwa ha bu ndi nche nke ndi nwoke ndi nwere ike di nkpa maka enyemaka ma nwekwa oku nke Chineke nke n’enwuputa nye ndi nakpo ha. Na nkenke, ha bụ ndị mmụọ ozi siri ike.
Ike ha na-ada ada nanị mgbe ụmụaka a si n’eluigwe hụrụ ka ndị mụrụ ha, ndị nne na nna nna ha na ndị ezinụlọ ha na-ebe akwa. Ha amaghi ihe ha g’eme n’ihu mkpu a mana umuaka a ma ihe kpatara ha jiri nwuo, n’ihi na Chineke kporo ha maka ozioma nke Chukwu ma ha biri ebube nke Eluigwe.
Ezigbo mama m, ezigbo nna, onye na-anwụ ọnwụ nke obere nwa, ugbu a ị na-enwe nnukwu ihe mgbu a na-enweghị ike ịkọwa akọwa ma ekwela ka okwukwe gị daa. I ghaghi ima n 'obu nani Chineke puru igbanwe ihe okike ya mere oburu na akpọkuola nwa gi ugbua nelu igwe enwere ihe g'eme ka gi mara otu ubochi. Tinye olile anya na mgbu gị. Naanị na-enwe olileanya na Chineke ka ị ga-enwe ike ịhụ a enwetụ okwukwe na ọdachi enweghị nkọwa ọ bụla.
WRITTEN BY PAOLO TESCIONE
← Na post gara aga Gara aga post:Kadinal ndị Lebanon: "Churchka nwere nnukwu ọrụ" mgbe ihe mgbawa Beirut gasịrị
Ọzọ Post → Post ozo:Na-eche echiche taa ma ị dị njikere ịsị "Ee" na Chineke